Book - 1 Chapter - 1 - BookCubicle
Book - 1 Chapter - 1
Author : magnolia__00
Genres : Adventure, Comedy, Action
Original Author : Bright Moonlight Frost On The Ground
အခနျး - ၁ ဒီ အငျမျောတယျက ဘာလို့ အရမျးတှေ ပြျောနရေတာလား..?
မွငျ့မားသညျ့ အဆောကျအဦတဈခုထိပျတှငျ ရပျနသေညျကွောငျ့ လကွေမျးမြားက အနျလငျး၏ ပတျပတျလညျတှငျ ဝနျးရံတိုကျခတျနသေညျ။
အနောကျကို လှညျ့လိုကျသညျ့အခါ ရကျစကျကွမျးကွုတျသူ တဈစုက သူ့ထံ ဖွညျးဖွညျးခငျြး ခဉျြးကပျလာသညျကို တှရေ့သညျ။
"ဟီးဟီးဟီး.. ဆိုးရှားလှနျးတဲ့ ကောငျကလေး.. ဒီတဈကွိမျ မငျးဘယျလို ထှကျပွေးမလဲ ကွညျ့ရအောငျ.. မငျးမှာ သတ်တိရှိတယျဆိုရငျ ဘာလို့ ပြံပွီး ထှကျမပွေးတာလဲ.." ခန်ဓာကိုယျ တုတျခိုငျသညျ့ ခေါငျးဆောငျလူကွီးသညျ သံတုတျကို လကျတှငျဝှရေ့မျးကာ သူ့မကျြနှာတှငျလညျး ရကျစကျမှုတို့က အထငျးသား ဖွဈသညျ။
သူ့မှာ ထှကျပွေးဖို့ရာ အခှငျ့အရေး မရှိတော့မှနျး အနျလငျးက သိလိုကျသညျ။ သို့ပမေဲ့လညျး ဖမျးမိသှားလြှငျ ဖွဈလာမညျ့ အကြိုးဆကျမြားအကွောငျး စဉျးစားမိသညျနှငျ့ သူ့ခန်ဓာကိုယျမှာ တုနျရီလာပွီး ထိနျးခြုပျမရနိုငျတော့ပေ။ ထိုဘဝက အရမျးကို လူမဆနျဘဲ ရကျစကျမညျမှနျး ရှငျးရှငျးလေးပငျ။
ဘာလုပျရမလဲ.. ငါဘာလုပျသငျ့လဲ.. ငါပြံသနျးနိုငျမယျဆိုရငျ တကယျကောငျးမှာပဲ.....
အနျလငျးက ထိုသို့တှေးနခြေိနျမှာပငျ လပွေငျးမြား တိုကျခိုကျလာပွီး သူ့ခန်ဓာကိုယျအား မွပွေငျမှနေ အထကျသို့ ပငျ့တငျပေးလိုကျသညျ။
အနျလငျးက ကွောကျလနျ့သှားသညျ။ သူ့အား လပွေငျးမြားက သယျဆောငျသှားနပွေီ ဖွဈကာ တကယျကွီး ပြံသနျးနပွေီ။
"လခှမျး... သူက တကယျကွီး ပြံနိုငျတာလားဟ..." မွပွေငျမှနေ မွငျ့တကျသှားသညျကို ကွညျ့ရငျး ထိုတုတျခိုငျသညျ့ ခေါငျးဆောငျလူကွီးမှာ အနျလငျးလိုပငျ အံ့ဩလှနျးသဖွငျ့ ဘာစကားမှပငျ ပွောမထှကျတော့ပေ။
လူအားလုံးရှမှေ့ာပငျ လပွေငျးမြားက အနျလငျးအား အဆောကျအဦထိပျမှနေ ချေါဆောငျသှားသညျ။
ထို့နောကျ လမြေား လှငျ့ပါးသှားပွီး လှတျလှတျကငျးကငျးကို ပွုတျကလြာတော့သညျ။
လငျြမွနျစှာ ပွုတျကလြာမှုကွောငျ့ တဟူးဟူး တိုကျခတျနသေညျ့ လမြေားနှငျ့ အလေးခြိနျမဲ့နသေညျ့ ဖွဈရပျတို့က အနျလငျးအား ကွောကျရှံ့စှာဖွငျ့ အသားကုနျအျောဟဈစလေသေညျ။
ငါသတေော့မယျ.. ငါသတေော့မယျ.. ငါသတေော့မယျ.....
အနျလငျးက စိတျထဲမှနေ ထိုသို့ ဆကျတိုကျ အျောဟဈနခေဲ့သညျ။
သဆေုံးရတော့မညျဆိုသော ကွောကျရှံ့စိတျက လှမျးခွုံလာသောအခါ သူ့ခန်ဓာကိုယျ၏ အစိတျအပိုငျးတိုငျးမှာ ထိနျးခြုပျမရလောကျအောငျ တုနျရီလာကွသညျ။
အဆောကျအဦ၏ ထိပျတှငျတော့ တုတျခိုငျသညျ့ ခေါငျးဆောငျမှာ အနျလငျး ကူကယျရာမဲ့ ပွုတျကလြာသညျကို ကွညျ့ရငျး အံ့အားသငျ့နမေိသညျ။ သိပျမကွာခငျမှာ ကနျြသူမြားဆီ လှညျ့လိုကျပွီး ဖွေးဖွေးခငျြး ပွောလိုကျသညျ။ "အဲဒီ... အဲဒီကလေးကို ငါက အဆောကျအဦပျေါကနေ ဖိအားပေးပွီး ခုနျခသြှားခိုငျးတာ မဟုတျဘူးနျော.. လကေ သူ့ဘာသူ သယျသှားတာ.. မငျးတို့ကောငျတှေ ငါ့အတှကျ သကျသခေံပေးရမယျနျော.. လုပျပါကှာ.. ငါက အပွဈမရှိပါဘူး.."
သူ့နောကျရှိ လူမြားမှာလညျး တှဝေမေိနျးမောနကွေသညျ။ လကေ အရမျးကို ပုံမှနျမဟုတျဘဲ တိုကျခတျလာခဲ့သညျ။ သူတို့မကျြမွငျ တှခေဲ့ရတာတောငျ မယုံနိုငျသေးတာ အခွားသူမြားမှာ မညျသို့ဆိုဖှယျရာ ရှိတော့မညျနညျး။
မွပွေငျနှငျ့ နီးကပျလာသညျကို ကွညျ့ပွီး အနျလငျးမှာ မြှျောလငျ့ခကျြမဲ့စှာနှငျ့ မကျြလုံးမြားကို မှိတျလိုကျတော့သညျ။ အခုလို မြှျောလငျ့ခကျြမဲ့ပွီး ရူးကွောငျကွောငျ အပွုအမူမြိုးနှငျ့ ဘဝကို အဆုံးသတျရမညျဟု မမြှျောလငျ့ခဲ့ပေ။
ထိုအခြိနျတှငျ အဖွူရောငျအလငျးမြားနှငျ့ လြှို့ဝှကျအလုံးလေး ရုတျတရကျပျေါလာခဲ့ပွီး သူ့ခန်ဓာကိုယျတဈခုလုံးအား လှမျးခွုံလိုကျသညျ။
ထိုခဏတှငျပငျ ရုတျတရကျ အရှိနျလြှော့ခမြှုကွောငျ့ ကွီးမားသညျ့ ဖိအားတဈခု ဖွဈပျေါလာသညျ။ အနျလငျးက မိုးပြံရထားစီးနသေကဲ့သို့ ခံစားနရေသညျ။ အောကျသို့ တရှိနျထိုး ပွုတျကြ.. လှညျ့ပတျ.. ပွီးနောကျ ကောငျးကငျသို့ ထိုးတကျ...။
အနျလငျးက နောကျတဈဖနျ အသားကုနျ အျောပွနျသညျ။ ကောငျးကငျသို့ နောကျတဈကွိမျ ထိုးတကျ ပြံသနျးပွီးသညျ့နောကျတှငျ သူ့ခန်ဓာကိုယျမှာ အဆောကျအဦထိပျသို့ ပွနျလညျ ပွုတျကလြာသညျ။
ကမ်ဘာမွကွေီး၏ ဆှဲငငျအားမှ ကငျးမဲ့ကာ ပွငျးထနျသညျ့ အလေးခြိနျကငျးမှုတို့အပွငျ သခွေငျးနှငျ့ ရှငျခွငျးကွား လူးလားခေါကျပွနျခဲ့ရသညျ့ ခံစားခကျြတို့က အနျလငျးအား မူးဝစေသေညျ။ ထို့နောကျ ထိနျးခြုပျ၍ မရတော့အောငျ ပြို့အနျတော့သညျ။
"ဟေ့... ဟေ့.. ကောငျကလေး.. အဆငျပွရေဲ့လား.." ထိုအခြိနျမှာပငျ အမွျောအမွငျပွညျ့ဝသညျ့ အသံတဈသံက အနျလငျး၏ နားအတှငျးသို့ ရောကျရှိလာခဲ့သညျ။
သူ့ခေါငျးကို ထောငျကွညျ့လိုကျသညျ့အခါ အဖိုးအိုတဈဦးက သူ့အား ကွငျနာစှာဖွငျ့ ငုံ့ကွညျနသေညျကို တှလေို့ကျရသညျ။
ထိုအဖိုးအို၏ နောကျတှငျတော့ သူ့အား ဖမျးဆီးရနျ ရောကျလာကွသညျ့ ရကျစကျကွမျးကွုတျသူ တဈစုသညျ မွပွေငျပျေါတှငျ သတိလဈ မမွေ့ောနကွေသညျကို တှလေို့ကျရသညျ။
ထိုအဖိုးအို၏ ဆံပငျနှငျ့ မုတျဆိတျတို့မှာ ဆှတျဆှတျဖွူနပွေီး သူ့၏ အပွုအမူ အပွောအဆိုတို့မှာလညျး လူသားတို့ထကျ သာလှနျနသေညျ။ သူ့ခန်ဓာကိုယျ တဈခုလုံးကို မှျောစှမျးအငျမြား၊ ရှရေောငျ အျောရာမြားနှငျ့ ဖုံးလှမျးနပွေီး မွငျ့မွတျကာ ပွဈမြိုးမှညျ့မထငျသညျ့ဟနျ ဖွဈနစေသေညျ။
ထိုသညျကို မွငျရသညျ့အခါ ကနျြးထြဲက ရုတျတရကျ ထိတျလနျ့သှားပွီး မြားလှစှာသော မွငျကှငျးတို့က သူ့အတှေးထဲသို့ ရောကျရှိလာတော့သညျ။
ဝတ်ထုတှေ.. ဂပြနျကာတှနျးတှေ.. ရုပျရှငျတှေ..
ထိုမွငျကှငျးမြားက သူ့စိတျထဲ တဈခုပွီးတဈခု ပျေါလာခဲ့သညျ။ သူ့မကျြရှိရှရှေိ့ မွငျကှငျးမှာ အိပျမကျမဟုတျလောကျပါဘူးနျော..။
ရငျတှေ တဒုနျးဒုနျး ခုနျလာခဲ့ပွီ။
အနျလငျးက အလှနျအကြံ ရိုကြိုးစှာနှငျ့ သူ့မကျြလုံးမြားတှငျ မကျြရညျမြားဝဲကာ "ကြှနျတော့ကို ကယျတငျပေးသညျ့အတှကျ အငျမျောတယျကွီးအား ကြေးဇူးတငျပါသညျ ခငျဗြာ.."
ထိုအဖိုးအိုသညျ အနျအငျးက သူ့အား အငျမျောတယျကွီးဟု ချေါလိုကျသဖွငျ့ သူ၏ မုတျဆိတျဖွူတို့အား ဖွေးညှငျးစှာ ပှတျသပျပွီး ခပျပါးပါး ပွုံးလိုကျသညျ။ "အခုနက ငါမန်တနျသုံးလိုကျတာမှာ မမှားသငျ့တဲ့ အမှားတဈခု ဖွဈခဲ့တာကွောငျ့ ငါ့သူငယျခငျြးလေးကို ကွောကျရှံ့စမေိခဲ့တယျ.. အဲဒီကောငျတှကေ သူငယျခငျြးလေးကို ဘာလို့ လိုကျဖမျးနကွေတာလဲ.."
ထိုသညျကို ကွားလိုကျရတော့ အနျလငျးမှာ အံ့အားသငျ့သှားသညျ။ သူက မန်တနျသုံးလိုကျတာမှာ မမှားသငျ့တဲ့အမှား လုပျလိုကျတယျ..? အဲတော့ ငါ့ကို ချေါဆောငျသှားတဲ့လကေ အဲဒီ အငျမျောတယျရဲ့ အမှားကွောငျ့ ဖွဈလာတာပေါ့..။
ဘယျလိုပဲဖွဈဖွဈ ထိုအငျမျောတယျကွီးသညျ သူ့အား ကယျတငျခဲ့သညျ။ ထိုအငျမျောတယျကွီး၏ အမေးကို ကွားလိုကျရသညျ့အခါ သူ့နှလုံးသားဆီမှနေ မရမေတှကျနိုငျသညျ့ မကနြေပျခကျြမြား ပျေါထှကျလာသညျ။
"အဲဒါက ဒီလိုပါ ခငျဗြာ.. ကြှနျတေျာ့အမေ ဆုံးပါးသှားတဲ့ နောကျပိုငျးကစပွီး ကြှနျတေျာ့အဖကေ လောငျးကစားကို စှဲလမျးလာခဲ့တယျ.. အိမျကိုလညျး လောငျးခဲ့တယျ.. အကွှေးသနျးပေါငျးမြားစှာလညျး တငျခဲ့တယျ.. အဲဒီအကွှေးတှကေို ပွနျမဆပျနိုငျတော့ သူက ကိုယျလှတျရုနျးပွီး ထှကျပွေးသှားတယျ.."
ခဏနားလိုကျပွီးနောကျ "ကြှနျတျော ဟှာခငျြးတက်ကသိုလျကို တကျခှငျ့ရတဲ့နောကျကြ အကွှေးရှငျတှကေ ကြှနျတေျာ့ကို ရှာတှသှေ့ားကွတယျ.. သူပွောတာက ကြှနျတျောအဖရေဲ့ အကွှေးတှကေို ကြှနျတျောက ကိုယျစားဆပျစခေငျြတယျတဲ့..
အဲဒီအကွှေးတှကေ သနျးနဲ့ခြီနတောလေ.. ကြှနျတျောက ဘယျလိုလုပျပွီး ပွနျဆပျနိုငျမှာတဲ့လဲ..
ကြှနျတေျာ့ခဈြသူကလညျး အဲဒီအကွောငျးကို သိသှားတော့ နညျးနညျးလေးတောငျ မစဉျးစားတော့ပဲ ကြှနျတော့ကို ထားပဈခဲ့တယျ..
အကွှေးရှငျတှကေ ကြှနျတေျာ့ကို ချေါသှားပွီး အလုပျကွမျးတှေ လုပျခိုငျးတယျ.. အဖရေဲ့ အကွှေးတှေ မကမြေခွငျး ထှကျသှားလို့ မရဘူးတဲ့..
အဲဒါက အရမျးကို ရကျစကျပွီး လူမဆနျဘူး.. ကြှနျတျောက လုံးဝ သညျးမခံနိုငျတော့တာကွောငျ့ ထှကျပွေးဖို့ ဆုံးဖွတျလိုကျတယျ.. အကွှေးရှငျက အဲဒီ ရကျစကျတဲ့သူတှနေဲ့ ကြှနျတေျာ့ကို ဖမျးခိုငျးလိုကျတာပဲ.. အဲဒီကနေ အခုလို အဖွဈတှေ ဖွဈလာရတာပါ ခငျဗြာ.."
သူ့ရဲ့ အခကျအခဲမြားကို ဖှငျ့ဟပွီးသညျနောကျ မကျြရညျမြား ကလြာတော့သညျ။ သူ၏ အနာဂတျမှာ မှောငျမိုကျနပွေီဟု ခံစားရသညျ။ တောငျးစားရခွငျးနှငျ့ တဈဘဝလုံး အကွှေးမြား ဆပျနရေခွငျးတို့က ဘာတှမြေား ကှာခွားမှာတဲ့တုနျး..။
အနျလငျး၏ ဝဒေနာမြားကို ကွားပွီးသညျ့နောကျတှငျ အငျမျောတယျကွီး၏ မကျြဝနျးတှငျ ကရုဏာအရိပျမြား သနျးလာတော့သညျ။ "ကောငျကလေး.. မငျးရဲ့ဘဝက အရမျးကို ကွမျးတမျးတာပါလား.. ဒီလိုဆိုရငျကော.. မငျးနဲ့ ငါက ကံကွမ်မာကွောငျ့ တှခေဲ့ရတာ.. မငျးမှာ ပါရမီရှိတာ ငါသိတယျ.. အဲတော့ ဒီ အငျမျောတယျကွီးက 'စနဈ' တဈခု လကျဆောငျပေးမယျကှာ.. အဲဒါက မငျးဘဝကွီးကို ပွောငျးလဲစလေိမျ့မယျ.. ဘယျလိုလဲ.. မကောငျးဘူးလား.."
ထိုသညျကို ကွားလိုကျရသညျ့အခါ အနျလငျးမှာ တုနျလှုပျသှားတော့သညျ။ အငျမျောတယျတဈယောကျနှငျ့ တှရေ့ခွငျးကပငျ သူ့အား အလှနျကံကောငျးနပွေီ ဖွဈကာ ထိုအငျမျောတယျက သူတို့ ပထမဆုံး တှကွေုံ့မှုမှာပငျ ရကျရကျရောရောနှငျ့ စနဈတဈခု လကျဆောငျပေးလာမညျဟု ဘယျတုနျးကမှ မမြှျောလငျ့ထားပေ။
"အငျမျောတယျဖိုးဖိုး ခငျဗြာ.. ဖိုးဖိုးက အရမျးကို ကွငျနာတတျတာပဲ.. ကြှနျတေျာ့က ဖိုးဖိုးကို ဘာပွနျပေးရမယျဆိုတာ တကယျမသိတော့ဘူးဗြ.." အနျလငျးက အလှနျစိတျလှုပျရှားလာပွီး မကျြရညျမြား ကဆြငျးကာ ထိုအဖိုးအိုကို နှေးထှေးစှာ ကွညျ့လိုကျသညျ။
ထိုအငျမျောတယျကွီးသညျ ကွငျနာစှာ ပွုံးလိုကျပွီး သူ့လကျဖဝါးကို ကောငျးကငျသို့ ဆနျ့တနျးလိုကျသညျ။ ခကျြခငျြးဆိုသလို အဖွူရောငျအလငျးမြားနှငျ့ အလှနျသနျ့စငျသညျ့ အလုံးလေးက သူ့လကျဖဝါးပျေါတှငျ ပျေါလာခဲ့သညျ။
"ကောငျကလေး.. ဒီကိုလာ.. ဒီအလငျးလုံးလေးကို ကိုငျပွီး မငျးလကျဖဝါးပျေါ တငျလိုကျ.." အငျမျောတယျကွီးက အနျလငျးအား ပွောသညျ။
ထိုသညျကို ကွားလိုကျတော့ အနျလငျးမှာ အလငျးလုံးလေးအား စိတျမရှညျစှာဖွငျ့ ဖမျးဆုပျလိုကျသညျ။
သူ့လကျထဲရှိ အလငျးလုံးလေးမှာ ပူနှေးသညျ့ရောငျခွညျမြား ထုတျလှတျနသေညျ။ ထိုအလုံးလေးမှ ထုတျလှတျနသေညျ့ အလငျးသညျ အလှနျတရာ နူးညံ့လှသညျ။
"စနဈလှဲပွောငျးမှု စတငျ..." အငျမျောတယျကွီးက ဖွေးညှငျးစှာ ဆိုလိုကျသညျ။
ထိုသို့ပွောပွီးသညျနှငျ့ အဖွူရောငျအလငျးလုံးလေးဆီမှ အလငျးသညျ အလှနျတောကျပလာသညျ။
ထိုအခြိနျမှာပငျ အငျမျောတယျကွီးက အနျလငျးအား "ကောငျကလေး.. မွနျမွနျ ကြိနျဆိုစမျး.. စဈနတျဘုရားစနဈကို လကျခံပွီးတာနဲ့ မငျးတဈဘဝလုံး ဘယျတော့မှ မစှနျ့လှတျပါဘူးလို့.."
ပွီးတော့ ကြိနျဆိုတာကွီးကလညျး ထိမျးမွားခွငျး ကြိနျဆိုမှုနဲ့ ဘာလို့တူနရေတာလား..
အနျလငျးက စဉျးစားခြိနျ မရှိတော့တာကွောငျ့ အလငျြအမွနျပငျ "ကြှနျတျော ကြိနျဆိုပါသညျ.. စဈနတျဘုရားစနဈကို လကျခံပွီးနောကျ ကြှနျတေျာ့တဈဘဝလုံး မစှနျ့လှတျပါ.."
အနျလငျး၏ ကြိနျဆိုမှု ပွီးသညျ့ နောကျတှငျ အလုံးလေးက သူ့ခန်ဓာကိုယျအတှငျးသို့ ဝငျရောကျပွီး ပေါငျးစပျသှားသညျ။
မရှေးမနှောငျးမှာပငျ သူစိတျထဲတှငျ အသံတဈသံ ထှကျပျေါလာသညျ။ "လကျခံသူသညျ ထနျြးမငျ ခန်ဓာကိုယျပိုငျရှငျဖွဈကွောငျး ထောကျလှမျးမိပွီး လိုအပျခကျြမြားနှငျ့ ပွညျ့စုံပါသညျ။ စနဈ၏ ပေါငျးစပျခွငျး စတငျပါပွီ..။"
အနျလငျးက အရမျးကို စိတျလှုပျရှားနပွေီး ထိုစိတျလှုပျရှားမှုကွောငျ့ ငိုခငျြလာခဲ့သညျ။
သူ့အနာဂတျကွီးက မှောငျမိုကျနလေိမျ့မညျဟု အစကထငျနခေဲ့ပွီး ယခုလိုမြိုး ဖွဈရပျမြိုးကို မမြှျောလငျ့ခဲ့ပေ။ ယခုအခြိနျတှငျတော့ ဤစနဈနှငျ့အတူ ဘဝအသဈတဈခုကို စတငျဖို့ရနျ ပေါငျးစပျနပွေီပဲ ဖွဈသညျ။
အငျမျောတယျကွီးမှာလညျး အရမျးကို စိတျလှုပျရှားနပေုံ ရသညျ။ စိတျလှုပျရှားလှနျးလို့ ငိုတော့မညျ့ပုံပငျ။
သူက ဒူးထောကျကာ မကျြရညျအပွညျ့ဖွငျ့ ကောငျးကငျကို မော့ကွညျ့လိုကျပွီး မမြှျောလငျ့စှာပငျ မကျြရညျမြားနှငျ့အတူ ရယျမောလိုကျသညျ။ "ဘှားဟားဟားဟား.. နောကျဆုံးတော့ အပေေးက ထှကျသှားပွီ.. ငါ့ဘဝကွီးက လှတျလပျခဲ့ပွီ.."
"အငျမျောတယျဖိုးဖိုး.. ဘာမှားလို့လဲ.. အဆငျပွရေဲ့လား ခငျဗြား.." ထိုအဖိုးအို၏ ထူးထူးဆနျးဆနျးအပွုအမူကို မွငျရသဖွငျ့ အနျလငျး က စိုးရိမျပွီး မေးလိုကျသညျ။
သူက အရမျးကို စိတျလှုပျရှားသှားသညျ့ကို သတိပွုမိလိုကျသဖွငျ့ အငျမျောတယျကွီးက သူ့ကိုယျသူ ပွနျထိနျးလိုကျပွီး မကျြရညျမြားကို သုတျလိုကျသညျ။
"အဆငျပွပေါတယျကှာ.. ငါမလိုခငျြတဲ့ အတိတျက ဖွဈရပျတှကေို ပွနျသတိရမိသှားလို့ပါ.. ကောငျကလေး.. မငျးက စနဈကို လကျခံလိုကျပွီဆိုတော့ ပိုပွီးတော့ ကွိုးစားဖို့ လိုလိမျ့မယျနျော.." အငျမျောတယျကွီးက အလေးအနကျပွောသညျ။
"အ..အမျ.... ဟုတျကဲ့ပါ.." အနျလငျးက ရိုးသားစှာ ခေါငျးညိတျလိုကျသညျ။
"အဲဒီတော့ မငျးစှမျးအငျလကေ့ငျြ့ဖို့ ကြောငျးတဈကြောငျးကြောငျးကို သှားခငျြသလား.. မငျးသှားဖို့အတှကျ သငျ့တျောတဲ့ကြောငျးကို ငါသိထားတယျ.."
စှမျးအငျကငျြ့ကွံဖို့ ကြောငျးသှားရမယျ..? ဒီလို ကမျးလှမျးမှုမြိုးကို သောကျရူးတှမှေပဲ ငွငျးပယျမှာပေါ့..
"သှားမယျ.. ကြှနျတျောတကယျ သှားခငျြတယျ.." အနျလငျးက တုံ့ဆိုငျးမနပေဲ ပွောသညျ။
ထိုသညျကို ကွားလိုကျရတော့ အငျမျောတယျကွီးက ကနြေပျစှာ ပွုံးလာပွီး သူ့အင်ျကြီလကျအတှငျးမှ ရှစောရှကျပိုငျးတဈခု ထုတျလိုကျသညျ။ အနျလငျးကို ကမျးပေးရငျး "ဒါက ငါ့ရဲ့ ထောကျခံစာပဲ.. ဒါနဲ့ဆို မငျးက စုစညျးညီညှတျ ကငျြ့ကွံခွငျးကြောငျးတျောမှာ ပညာသငျနိုငျပွီး အငျမျောတယျလမျးစဉျကို တရားဝငျ ခွခေနြိုငျလိမျ့မယျကှ.."
အနျလငျးက အံ့အားသငျ့သှားသညျ။ ထိုအငျမျောတယျကွီးသညျ သူ့အား ရှညျလြားသညျ့ ကငျြ့ကွံခွငျးလမျးစဉျကို လြှောကျလှမျးနိုငျပွီး ထူးခြှနျသူ ဖွဈလာအောငျ ကူညီလမျးခငျးပေးနခွေငျးပေ။
သူက ထောကျခံစာကို တရိုတသနှေငျ့ ယူလိုကျပွီး ကြေးဇူးတငျသညျ့အကွညျ့နှငျ့ ကွညျ့လိုကျသညျ။
"အငျမျောတယျဖိုးဖိုးရဲ့ နာမညျကို ကြှနျတျောက သိလို့ရမလား ခငျဗြာ..."
"ငါ့နာမညျ......... အမြားကွီး တှေးမနပေါနဲ့ကှာ..." အငျမျောတယျကွီးက အနျလငျး၏ခေါငျးကို ညငျသာစှာပုတျလိုကျပွီး သူ့မကျြနှာတှငျ ကရုဏာသကျသညျ့ အကွညျ့မြားကိုလညျး မွငျတှရေ့သညျ။
"ကဲ.. ငါသှားရတော့မယျ.. နောကျမြားမှ တှကွေ့တာပေါ့ ကောငျကလေးရေ..."
အငျမျောတယျကွီးက လကျပွနှုတျဆကျပွီးနောကျ တိမျခိုးမြားကိုစီးနငျးကာ ပြောကျကှယျသှားသညျ။
"ဂရုစိုကျပါ အငျမျောတယျကွီး ခငျဗြာ.." ကောငျးကငျပျေါတှငျ ပြံသနျးသှားသညျ့ အငျမျောတယျကွီးအားကွညျ့ပွီး ကနျြးထြဲက အရိုအသပွေုကာ ပွောလိုကျသညျ။
ကောငျးကငျမှနေ ပြံ့နှံ့ရောကျရှိလာသညျ့ အငျမျောတယျကွီး၏ ရယျသံမှာ အလှနျတရာကို ကနြေပျပြျောရှငျနသေညျ့ပုံပငျ။ ထိုရယျသံက ဘဝတဈလြှောကျ ထမျးပိုးထားရသညျ့ နာကညျြးခကျြမြားအား လှတျခလြိုကျနိုငျရာမှ ထှကျပျေါလာခွငျးမြိုးပငျ။
ဒီအငျမျောတယျက ဘာလို့အရမျးတှေ ပြျောနရေတာတုနျး... သူ့ကွညျ့ရတာ ငါ့ထကျတောငျ ပိုပြျောနသေေးသလားလို့...
အနျလငျး၏ မကျြနှာတှငျ စိတျရှုပျထှေးမှုမြား ပျေါလာခဲ့ပွီး သူ့ခေါငျးကိုသာ ဆှဲကုတျလိုကျသညျ။
ထိုအခြိနျမှာပငျ အမြိုးသမီးအသံတဈခုက အနျလငျး၏ စိတျထဲမှနေ ပျေါထှကျလာသညျ။ "မင်ျဂလာပါ.."
ထိုအသံကို ကွားလိုကျရတော့ အနျလငျးက လနျ့သှားသညျ။ ထိုအမြိုးသမီး၏ အသံမှာ လှပပွီး ညငျသာလှနျးသညျ။
ဒါက စနဈရဲ့ အသံလား..? အနျလငျးက အံ့ဩပွီး မသခြောပေ။
ထိုအခြိနျမှာပငျ သူ့စိတျထဲ၌ နယျပယျတဈခု ပျေါလာခဲ့သညျ။
ထိုနယျပယျသညျ မီးခိုးရောငျဖွဈပွီး စာလုံးအခြို့သာ ရေးသားထားသညျ။ "စဈနတျဘုရားစနဈသညျ ထိုကျခြူ ကုနျးမွကွေီးအတှငျးသို့ ဝငျရောကျမှသာ စတငျအသကျဝငျလာမညျ ဖွဈသညျ..။"
ထိုကျခြူကုနျးမွကွေီး ဆိုတာက ဘာကွီးလား...?
အနျလငျးက အငျမျောတယျကွီး ပေးခဲ့သညျ့ ထောကျခံစာကို ပွနျထုတျလိုကျပွီး သူ့လကျထဲရှိ ရှစောရှကျကို မြှျောလငျ့တကွီး ဖွနျ့ကွညျ့လိုကျသညျ။
ထိုရှစောရှကျပျေါတှငျ ခပျဖြော့ဖြော့ လကျဗှရောတဈခုမှ အပ မညျသညျမှ ရှိမနသေညျကို မြားမကွာမီပငျ သိလိုကျရသညျ။
အနျလငျးက မသခြောမရရောမှုဖွငျ့ ထိုစာရှကျပျေါရှိ လကျ‌ဗှရောပျေါသို့ သူ့လကျကို တငျလိုကျသညျ။
ရုတျတရကျဆိုသလိုပငျ ရှစောရှကျဆီမှနေ ခမျးနားတောကျပသညျ့ ရှရေောငျအလငျးမြားက ဖွာထှကျလာပွီး ကနျြးထြဲအား အံ့ဩခြိနျပငျ မပေးကာ ခန်ဓာကိုယျတဈခုလုံးကို ဝါးမွိုသှားသညျ။
တောကျပသညျ့ အလငျးရောငျတဈခုက သူ့အမွငျအာရုံထဲသို့ တဈဖနျပွနျ ဝငျရောကျလာသညျကို အနျလငျးက ခံစားလိုကျရသညျ။
ထို့နောကျ သူ့ခန်ဓာကိုယျမှာ နောကျတဈကွိမျပွနျလညျပွီး ကောငျးကငျသို့ မွငျ့တကျပွီးနောကျ လှတျလှတျကငျးကငျး ပွနျလညျပွုတျကနြခွေငျးကို သိလိုကျရပွနျသညျ။
နောကျထပျတဈဖနျ အဆောကျအဦပျေါမှ ပွုတျကသြညျ့ အတှအေ့ကွုံကို ရရှိလိုကျပွနျသညျ။ မညျမြှပငျ အတှအေ့ကွုံရှိနပေါစေ အကွိမျတိုငျးက အသဈအသဈသော ခံစားခကျြကို ဖွဈပျေါစသေဖွငျ့ အကွိမျတိုငျး ငိုခငျြစိတျပေါကျသညျ ခညျြးသာ။
သူက မွပွေငျပျေါသို့ ပွငျးထနျစှာ ပွုတျကပြွီး ကံကောငျးထောကျမစှာဖွငျ့ ရှရေောငျအလငျးမြားက လှမျးခွုံထားသဖွငျ့သာ အသကျရှငျနခွေငျးပေ။
"ဘယျလိုမြိုး နရောရှပွေ့ောငျးတဲ့ နညျးပညာလဲကှာ.. အရမျးကို ကွမျးတမျးလှနျးတယျ.." ကနျြးထြဲက မွပွေငျပျေါတှငျ လဲလြောငျးနရေငျး ညညျးညူလိုကျသညျ။
သူ့ခေါငျးကို ခကျခကျခဲခဲ မော့လိုကျပွီး သူ့ကိုယျဟနျကို ပွနျလညျ စုစညျးလိုကျသညျ။
ထို့နောကျ သူ့ဘဝတှငျ ဘယျသောအခါတှငျမှ မနေို့ငျတော့မညျ မဟုတျသညျ့ အရာကို မွငျတှလေို့ကျရသညျ။
နဂါးရုပျပုံမြားစှာဖွငျ့ တနျဆာဆငျထားသညျ့ အဖွူရောငျတိုငျလုံးကွီး နှဈခုသညျ ကောငျးကငျသို့ မီတာရာပေါငျးမြားစှာ ထိုးတှကျနသေညျ။ ဆနျးကွယျသညျ့ ပုံရိပျမြားစှာက မညျသညျကို ထှငျးထုထားမှနျး နားမလညျနိုငျအောငျ ရှိနသေညျ။
ဝငျပေါကျနောကျတှငျတော့ ထောငျနှငျ့ခြီသညျ့ နနျးတျောမြားစှာက မကျြစိတဆုံး ရှိနသေညျ။
တလကျလကျတောကျပနသေညျ့ တိမျမြားက နနျးတျောမြား ပတျလညျတှငျ လှငျ့မြောနပွေီး ကောငျးကငျနှငျ့ မွပွေငျကွားတှငျ ဝိညာဉျသားရဲမြိုးစုံက ပြံဝဲလကျြရှိသညျ။ ကောငျးကငျဘုံသညျ ခမျးနားပွီး ကွီးကယျြလှနျးလှပသေညျ။
အနျလငျးသညျ တှတှေလေေး ရပျနမေိပွီး မကျြနှာတှငျလညျး အံ့ဩခွငျးအပွညျ့နှငျ့ဖွဈသညျ။
အဲဒီတော့.. ဒီကမ်ဘာကွီးမှာ အငျမျောတယျလောကဆိုတာ တကယျကွီး ရှိတာပေါ့...
ငါကလညျး အငျမျောတယျလောကကို ရောကျလာနိုငျတယျပေါ့.. အနျလငျးက သူ့စိတျလှုပျရှားမှုကို ထိနျးခြုပျလိုကျပွီး သူ့ကိုယျသူ တညျငွိမျအောငျ ပွုလိုကျသညျ။
တဈခဏကွာတော့ တာအိုဝတျစုံ ဝတျဆငျထားသညျ့ မိနျးကလေးတဈယောကျက သူ့ဆီသို့ လြှောကျလှမျးလာသညျကို မွငျလိုကျရသညျ။ သူ့အခွအေနကေို အတညျပွုလိုသဖွငျ့ အလြှငျအမွနျပွေးသှားပွီး ထိုမိနျးကလေးကို နှုတျဆကျလိုကျသညျ။
"မင်ျဂလာပါ အငျမျောတယျ ညီမလေး ခငျဗြာ.." အနျလငျးက မိနျးကလေးကို လကျပွလိုကျသညျ။
အနျလငျး လကျပွနှုတျဆကျသညျကို မွငျသဖွငျ့ ထိုမိနျးမလှလေးက သူ့ဆီသို့ လြှောကျလှမျးလာသညျ။
ထိုသညျကို မွငျတော့ အနျလငျးက စိတျလှုပျရှားစှာဖွငျ့ "နတျမိမယျ မိနျးမလှလေး ခငျဗြာ.. ဒီနရောက ဘယျနရောဆိုတာ သိခှငျ့ရမလား ခငျဗြာ.. ကြှနျတျောက အခုမှရောကျရှိလာတာ ဖွဈပွီး ဒီနရောနဲ့ အစိမျးသကျသကျ ဖွဈနလေို့ပါ ခငျဗြာ.."
အနျလငျး၏ စကားလုံးမြားကို ကွားရတော့ ထိုမိနျးကလေး၏ အမူအရာမှာ ထူးဆနျးသှားပွီး "ကြိ လိ ကု လု?"
"ဟမျ.. ဘာပွောတာပါလဲ ခငျဗြာ.." အနျလငျးက အနညျးငယျ ခေါငျးရှုပျလာသညျ။
အနျလငျးကဲ့သို့ပငျ ထိုမိနျးကလေးသညျလညျး ခေါငျးရှုပျသညျ့ အမူအရာ ဖွဈလာခဲ့သညျ။ "ကြိ လိ ကု လု ဝ လဲ ကြိ လိ?"
အနျလငျးက စိတျရှုပျထှေးလာသညျ။ သူက ဘယျကမ်ဘာရဲ့ ဘာသာစကားကို ပွောနတောတုနျး..။
ကွောကျမကျဖှယျ အတှေးက သူ့ခေါငျးထဲ ရောကျရှိလာသညျ။
"နတျသမီးညီမလေး.. မငျး တရုတျလို ပွောတတျလား.." အနျလငျး၏ မကျြလုံးမြားမှာ မကျြရညျမြားပငျ ဝဲနသေညျ။
"ကု လု ကု လု ဝ ကြိ ကြိ ကြိ?" ထိုမိနျးမလှလေးသညျ သူမ၏ လကျမြားကို ခါးတှငျထောကျလိုကျပွီး အနညျးငယျ ဒေါသထှကျလာပုံရသညျ။
ပွီးသှားပွီ.. ငါတို့မှာ ဘာသာစကားက အတားအဆီး ဖွဈသှားပွီ..
ဘယျကမ်ဘာက စကားတှကေို သူပွောနတောတုနျး.. ငါတကယျကို နားမလညျနိုငျတော့ဘူး..
ထိုအခြိနျမှာပငျ အနျလငျးက အနညျးငယျ ရူးခငျြစိတျပငျ ပေါကျလာသညျ။ သူက ထိုနရောမှာပငျ ရပျနပွေီး မကျြလုံးမြားမှာ ကွောငျတောငျတောငျ ဖွဈနသေညျ။ သူ့စိတျထဲတှငျ အတှေးတဈခုသာလြှငျ ရှိသညျ။
ဘာလို့လဲ... ဝတ်ထုတှထေဲကနဲ့ လုံးဝကို မတူတာပဲဟ.. ကမ်ဘာကွီး တဈခုလုံးက တရုတျစကား ပွောကွတာ မဟုတျဘူးလားဟငျ...
နောကျဆုံးမှာတော့ အနျလငျးက စတငျငိုပါတော့သညျ။
ငါက စကားကိုတောငျ နားမလညျဘူးဆိုရငျ ဘယျလိုလုပျ ကငျြ့ကွံနညျးကို သငျယူပွီး အငျမျောတယျ ဖွဈလာမှာတဲ့လဲ.. တခွားသူတှကေ သူတို့ရဲ့ ခရီးကွမျးတှကေို အားနညျးခွငျးကနေ စတငျကွတယျ.. ငါကတြော့ အစကတညျးက အနှောငျ့အယှကျက ငါကိုယျတိုငျ ဖွဈနတောပဲ...။
အခန်း - ၁ ဒီ အင်မော်တယ်က ဘာလို့ အရမ်းတွေ ပျော်နေရတာလား..?
မြင့်မားသည့် အဆောက်အဦတစ်ခုထိပ်တွင် ရပ်နေသည်ကြောင့် လေကြမ်းများက အန်လင်း၏ ပတ်ပတ်လည်တွင် ဝန်းရံတိုက်ခတ်နေသည်။
အနောက်ကို လှည့်လိုက်သည့်အခါ ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်သူ တစ်စုက သူ့ထံ ဖြည်းဖြည်းချင်း ချဉ်းကပ်လာသည်ကို တွေ့ရသည်။
"ဟီးဟီးဟီး.. ဆိုးရွားလွန်းတဲ့ ကောင်ကလေး.. ဒီတစ်ကြိမ် မင်းဘယ်လို ထွက်ပြေးမလဲ ကြည့်ရအောင်.. မင်းမှာ သတ္တိရှိတယ်ဆိုရင် ဘာလို့ ပျံပြီး ထွက်မပြေးတာလဲ.." ခန္ဓာကိုယ် တုတ်ခိုင်သည့် ခေါင်းဆောင်လူကြီးသည် သံတုတ်ကို လက်တွင်ဝှေ့ရမ်းကာ သူ့မျက်နှာတွင်လည်း ရက်စက်မှုတို့က အထင်းသား ဖြစ်သည်။
သူ့မှာ ထွက်ပြေးဖို့ရာ အခွင့်အရေး မရှိတော့မှန်း အန်လင်းက သိလိုက်သည်။ သို့ပေမဲ့လည်း ဖမ်းမိသွားလျှင် ဖြစ်လာမည့် အကျိုးဆက်များအကြောင်း စဉ်းစားမိသည်နှင့် သူ့ခန္ဓာကိုယ်မှာ တုန်ရီလာပြီး ထိန်းချုပ်မရနိုင်တော့ပေ။ ထိုဘဝက အရမ်းကို လူမဆန်ဘဲ ရက်စက်မည်မှန်း ရှင်းရှင်းလေးပင်။
ဘာလုပ်ရမလဲ.. ငါဘာလုပ်သင့်လဲ.. ငါပျံသန်းနိုင်မယ်ဆိုရင် တကယ်ကောင်းမှာပဲ.....
အန်လင်းက ထိုသို့တွေးနေချိန်မှာပင် လေပြင်းများ တိုက်ခိုက်လာပြီး သူ့ခန္ဓာကိုယ်အား မြေပြင်မှနေ အထက်သို့ ပင့်တင်ပေးလိုက်သည်။
အန်လင်းက ကြောက်လန့်သွားသည်။ သူ့အား လေပြင်းများက သယ်ဆောင်သွားနေပြီ ဖြစ်ကာ တကယ်ကြီး ပျံသန်းနေပြီ။
"လခွမ်း... သူက တကယ်ကြီး ပျံနိုင်တာလားဟ..." မြေပြင်မှနေ မြင့်တက်သွားသည်ကို ကြည့်ရင်း ထိုတုတ်ခိုင်သည့် ခေါင်းဆောင်လူကြီးမှာ အန်လင်းလိုပင် အံ့ဩလွန်းသဖြင့် ဘာစကားမှပင် ပြောမထွက်တော့ပေ။
လူအားလုံးရှေ့မှာပင် လေပြင်းများက အန်လင်းအား အဆောက်အဦထိပ်မှနေ ခေါ်ဆောင်သွားသည်။
ထို့နောက် လေများ လွင့်ပါးသွားပြီး လွတ်လွတ်ကင်းကင်းကို ပြုတ်ကျလာတော့သည်။
လျင်မြန်စွာ ပြုတ်ကျလာမှုကြောင့် တဟူးဟူး တိုက်ခတ်နေသည့် လေများနှင့် အလေးချိန်မဲ့နေသည့် ဖြစ်ရပ်တို့က အန်လင်းအား ကြောက်ရွံ့စွာဖြင့် အသားကုန်အော်ဟစ်စေလေသည်။
ငါသေတော့မယ်.. ငါသေတော့မယ်.. ငါသေတော့မယ်.....
အန်လင်းက စိတ်ထဲမှနေ ထိုသို့ ဆက်တိုက် အော်ဟစ်နေခဲ့သည်။
သေဆုံးရတော့မည်ဆိုသော ကြောက်ရွံ့စိတ်က လွှမ်းခြုံလာသောအခါ သူ့ခန္ဓာကိုယ်၏ အစိတ်အပိုင်းတိုင်းမှာ ထိန်းချုပ်မရလောက်အောင် တုန်ရီလာကြသည်။
အဆောက်အဦ၏ ထိပ်တွင်တော့ တုတ်ခိုင်သည့် ခေါင်းဆောင်မှာ အန်လင်း ကူကယ်ရာမဲ့ ပြုတ်ကျလာသည်ကို ကြည့်ရင်း အံ့အားသင့်နေမိသည်။ သိပ်မကြာခင်မှာ ကျန်သူများဆီ လှည့်လိုက်ပြီး ဖြေးဖြေးချင်း ပြောလိုက်သည်။ "အဲဒီ... အဲဒီကလေးကို ငါက အဆောက်အဦပေါ်ကနေ ဖိအားပေးပြီး ခုန်ချသွားခိုင်းတာ မဟုတ်ဘူးနော်.. လေက သူ့ဘာသူ သယ်သွားတာ.. မင်းတို့ကောင်တွေ ငါ့အတွက် သက်သေခံပေးရမယ်နော်.. လုပ်ပါကွာ.. ငါက အပြစ်မရှိပါဘူး.."
သူ့နောက်ရှိ လူများမှာလည်း တွေဝေမိန်းမောနေကြသည်။ လေက အရမ်းကို ပုံမှန်မဟုတ်ဘဲ တိုက်ခတ်လာခဲ့သည်။ သူတို့မျက်မြင် တွေ့ခဲ့ရတာတောင် မယုံနိုင်သေးတာ အခြားသူများမှာ မည်သို့ဆိုဖွယ်ရာ ရှိတော့မည်နည်း။
မြေပြင်နှင့် နီးကပ်လာသည်ကို ကြည့်ပြီး အန်လင်းမှာ မျှော်လင့်ချက်မဲ့စွာနှင့် မျက်လုံးများကို မှိတ်လိုက်တော့သည်။ အခုလို မျှော်လင့်ချက်မဲ့ပြီး ရူးကြောင်ကြောင် အပြုအမူမျိုးနှင့် ဘဝကို အဆုံးသတ်ရမည်ဟု မမျှော်လင့်ခဲ့ပေ။
ထိုအချိန်တွင် အဖြူရောင်အလင်းများနှင့် လျှို့ဝှက်အလုံးလေး ရုတ်တရက်ပေါ်လာခဲ့ပြီး သူ့ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးအား လွှမ်းခြုံလိုက်သည်။
ထိုခဏတွင်ပင် ရုတ်တရက် အရှိန်လျှော့ချမှုကြောင့် ကြီးမားသည့် ဖိအားတစ်ခု ဖြစ်ပေါ်လာသည်။ အန်လင်းက မိုးပျံရထားစီးနေသကဲ့သို့ ခံစားနေရသည်။ အောက်သို့ တရှိန်ထိုး ပြုတ်ကျ.. လှည့်ပတ်.. ပြီးနောက် ကောင်းကင်သို့ ထိုးတက်...။
အန်လင်းက နောက်တစ်ဖန် အသားကုန် အော်ပြန်သည်။ ကောင်းကင်သို့ နောက်တစ်ကြိမ် ထိုးတက် ပျံသန်းပြီးသည့်နောက်တွင် သူ့ခန္ဓာကိုယ်မှာ အဆောက်အဦထိပ်သို့ ပြန်လည် ပြုတ်ကျလာသည်။
ကမ္ဘာမြေကြီး၏ ဆွဲငင်အားမှ ကင်းမဲ့ကာ ပြင်းထန်သည့် အလေးချိန်ကင်းမှုတို့အပြင် သေခြင်းနှင့် ရှင်ခြင်းကြား လူးလားခေါက်ပြန်ခဲ့ရသည့် ခံစားချက်တို့က အန်လင်းအား မူးဝေစေသည်။ ထို့နောက် ထိန်းချုပ်၍ မရတော့အောင် ပျို့အန်တော့သည်။
"ဟေ့... ဟေ့.. ကောင်ကလေး.. အဆင်ပြေရဲ့လား.." ထိုအချိန်မှာပင် အမြော်အမြင်ပြည့်ဝသည့် အသံတစ်သံက အန်လင်း၏ နားအတွင်းသို့ ရောက်ရှိလာခဲ့သည်။
သူ့ခေါင်းကို ထောင်ကြည့်လိုက်သည့်အခါ အဖိုးအိုတစ်ဦးက သူ့အား ကြင်နာစွာဖြင့် ငုံ့ကြည်နေသည်ကို တွေ့လိုက်ရသည်။
ထိုအဖိုးအို၏ နောက်တွင်တော့ သူ့အား ဖမ်းဆီးရန် ရောက်လာကြသည့် ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်သူ တစ်စုသည် မြေပြင်ပေါ်တွင် သတိလစ် မေ့မြောနေကြသည်ကို တွေ့လိုက်ရသည်။
ထိုအဖိုးအို၏ ဆံပင်နှင့် မုတ်ဆိတ်တို့မှာ ဆွတ်ဆွတ်ဖြူနေပြီး သူ့၏ အပြုအမူ အပြောအဆိုတို့မှာလည်း လူသားတို့ထက် သာလွန်နေသည်။ သူ့ခန္ဓာကိုယ် တစ်ခုလုံးကို မှော်စွမ်းအင်များ၊ ရွှေရောင် အော်ရာများနှင့် ဖုံးလွှမ်းနေပြီး မြင့်မြတ်ကာ ပြစ်မျိုးမှည့်မထင်သည့်ဟန် ဖြစ်နေစေသည်။
ထိုသည်ကို မြင်ရသည့်အခါ ကျန်းထျဲက ရုတ်တရက် ထိတ်လန့်သွားပြီး များလှစွာသော မြင်ကွင်းတို့က သူ့အတွေးထဲသို့ ရောက်ရှိလာတော့သည်။
ဝတ္ထုတွေ.. ဂျပန်ကာတွန်းတွေ.. ရုပ်ရှင်တွေ..
ထိုမြင်ကွင်းများက သူ့စိတ်ထဲ တစ်ခုပြီးတစ်ခု ပေါ်လာခဲ့သည်။ သူ့မျက်ရှိရှေ့ရှိ မြင်ကွင်းမှာ အိပ်မက်မဟုတ်လောက်ပါဘူးနော်..။
ရင်တွေ တဒုန်းဒုန်း ခုန်လာခဲ့ပြီ။
အန်လင်းက အလွန်အကျံ ရိုကျိုးစွာနှင့် သူ့မျက်လုံးများတွင် မျက်ရည်များဝဲကာ "ကျွန်တော့ကို ကယ်တင်ပေးသည့်အတွက် အင်မော်တယ်ကြီးအား ကျေးဇူးတင်ပါသည် ခင်ဗျာ.."
ထိုအဖိုးအိုသည် အန်အင်းက သူ့အား အင်မော်တယ်ကြီးဟု ခေါ်လိုက်သဖြင့် သူ၏ မုတ်ဆိတ်ဖြူတို့အား ဖြေးညှင်းစွာ ပွတ်သပ်ပြီး ခပ်ပါးပါး ပြုံးလိုက်သည်။ "အခုနက ငါမန္တန်သုံးလိုက်တာမှာ မမှားသင့်တဲ့ အမှားတစ်ခု ဖြစ်ခဲ့တာကြောင့် ငါ့သူငယ်ချင်းလေးကို ကြောက်ရွံ့စေမိခဲ့တယ်.. အဲဒီကောင်တွေက သူငယ်ချင်းလေးကို ဘာလို့ လိုက်ဖမ်းနေကြတာလဲ.."
ထိုသည်ကို ကြားလိုက်ရတော့ အန်လင်းမှာ အံ့အားသင့်သွားသည်။ သူက မန္တန်သုံးလိုက်တာမှာ မမှားသင့်တဲ့အမှား လုပ်လိုက်တယ်..? အဲတော့ ငါ့ကို ခေါ်ဆောင်သွားတဲ့လေက အဲဒီ အင်မော်တယ်ရဲ့ အမှားကြောင့် ဖြစ်လာတာပေါ့..။
ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် ထိုအင်မော်တယ်ကြီးသည် သူ့အား ကယ်တင်ခဲ့သည်။ ထိုအင်မော်တယ်ကြီး၏ အမေးကို ကြားလိုက်ရသည့်အခါ သူ့နှလုံးသားဆီမှနေ မရေမတွက်နိုင်သည့် မကျေနပ်ချက်များ ပေါ်ထွက်လာသည်။
"အဲဒါက ဒီလိုပါ ခင်ဗျာ.. ကျွန်တော့်အမေ ဆုံးပါးသွားတဲ့ နောက်ပိုင်းကစပြီး ကျွန်တော့်အဖေက လောင်းကစားကို စွဲလမ်းလာခဲ့တယ်.. အိမ်ကိုလည်း လောင်းခဲ့တယ်.. အကြွေးသန်းပေါင်းများစွာလည်း တင်ခဲ့တယ်.. အဲဒီအကြွေးတွေကို ပြန်မဆပ်နိုင်တော့ သူက ကိုယ်လွတ်ရုန်းပြီး ထွက်ပြေးသွားတယ်.."
ခဏနားလိုက်ပြီးနောက် "ကျွန်တော် ဟွာချင်းတက္ကသိုလ်ကို တက်ခွင့်ရတဲ့နောက်ကျ အကြွေးရှင်တွေက ကျွန်တော့်ကို ရှာတွေ့သွားကြတယ်.. သူပြောတာက ကျွန်တော်အဖေရဲ့ အကြွေးတွေကို ကျွန်တော်က ကိုယ်စားဆပ်စေချင်တယ်တဲ့..
အဲဒီအကြွေးတွေက သန်းနဲ့ချီနေတာလေ.. ကျွန်တော်က ဘယ်လိုလုပ်ပြီး ပြန်ဆပ်နိုင်မှာတဲ့လဲ..
ကျွန်တော့်ချစ်သူကလည်း အဲဒီအကြောင်းကို သိသွားတော့ နည်းနည်းလေးတောင် မစဉ်းစားတော့ပဲ ကျွန်တော့ကို ထားပစ်ခဲ့တယ်..
အကြွေးရှင်တွေက ကျွန်တော့်ကို ခေါ်သွားပြီး အလုပ်ကြမ်းတွေ လုပ်ခိုင်းတယ်.. အဖေ့ရဲ့ အကြွေးတွေ မကျေမခြင်း ထွက်သွားလို့ မရဘူးတဲ့..
အဲဒါက အရမ်းကို ရက်စက်ပြီး လူမဆန်ဘူး.. ကျွန်တော်က လုံးဝ သည်းမခံနိုင်တော့တာကြောင့် ထွက်ပြေးဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်.. အကြွေးရှင်က အဲဒီ ရက်စက်တဲ့သူတွေနဲ့ ကျွန်တော့်ကို ဖမ်းခိုင်းလိုက်တာပဲ.. အဲဒီကနေ အခုလို အဖြစ်တွေ ဖြစ်လာရတာပါ ခင်ဗျာ.."
သူ့ရဲ့ အခက်အခဲများကို ဖွင့်ဟပြီးသည်နောက် မျက်ရည်များ ကျလာတော့သည်။ သူ၏ အနာဂတ်မှာ မှောင်မိုက်နေပြီဟု ခံစားရသည်။ တောင်းစားရခြင်းနှင့် တစ်ဘဝလုံး အကြွေးများ ဆပ်နေရခြင်းတို့က ဘာတွေများ ကွာခြားမှာတဲ့တုန်း..။
အန်လင်း၏ ဝေဒနာများကို ကြားပြီးသည့်နောက်တွင် အင်မော်တယ်ကြီး၏ မျက်ဝန်းတွင် ကရုဏာအရိပ်များ သန်းလာတော့သည်။ "ကောင်ကလေး.. မင်းရဲ့ဘဝက အရမ်းကို ကြမ်းတမ်းတာပါလား.. ဒီလိုဆိုရင်ကော.. မင်းနဲ့ ငါက ကံကြမ္မာကြောင့် တွေ့ခဲ့ရတာ.. မင်းမှာ ပါရမီရှိတာ ငါသိတယ်.. အဲတော့ ဒီ အင်မော်တယ်ကြီးက 'စနစ်' တစ်ခု လက်ဆောင်ပေးမယ်ကွာ.. အဲဒါက မင်းဘဝကြီးကို ပြောင်းလဲစေလိမ့်မယ်.. ဘယ်လိုလဲ.. မကောင်းဘူးလား.."
ထိုသည်ကို ကြားလိုက်ရသည့်အခါ အန်လင်းမှာ တုန်လှုပ်သွားတော့သည်။ အင်မော်တယ်တစ်ယောက်နှင့် တွေ့ရခြင်းကပင် သူ့အား အလွန်ကံကောင်းနေပြီ ဖြစ်ကာ ထိုအင်မော်တယ်က သူတို့ ပထမဆုံး တွေ့ကြုံမှုမှာပင် ရက်ရက်ရောရောနှင့် စနစ်တစ်ခု လက်ဆောင်ပေးလာမည်ဟု ဘယ်တုန်းကမှ မမျှော်လင့်ထားပေ။
"အင်မော်တယ်ဖိုးဖိုး ခင်ဗျာ.. ဖိုးဖိုးက အရမ်းကို ကြင်နာတတ်တာပဲ.. ကျွန်တော့်က ဖိုးဖိုးကို ဘာပြန်ပေးရမယ်ဆိုတာ တကယ်မသိတော့ဘူးဗျ.." အန်လင်းက အလွန်စိတ်လှုပ်ရှားလာပြီး မျက်ရည်များ ကျဆင်းကာ ထိုအဖိုးအိုကို နွေးထွေးစွာ ကြည့်လိုက်သည်။
ထိုအင်မော်တယ်ကြီးသည် ကြင်နာစွာ ပြုံးလိုက်ပြီး သူ့လက်ဖဝါးကို ကောင်းကင်သို့ ဆန့်တန်းလိုက်သည်။ ချက်ချင်းဆိုသလို အဖြူရောင်အလင်းများနှင့် အလွန်သန့်စင်သည့် အလုံးလေးက သူ့လက်ဖဝါးပေါ်တွင် ပေါ်လာခဲ့သည်။
"ကောင်ကလေး.. ဒီကိုလာ.. ဒီအလင်းလုံးလေးကို ကိုင်ပြီး မင်းလက်ဖဝါးပေါ် တင်လိုက်.." အင်မော်တယ်ကြီးက အန်လင်းအား ပြောသည်။
ထိုသည်ကို ကြားလိုက်တော့ အန်လင်းမှာ အလင်းလုံးလေးအား စိတ်မရှည်စွာဖြင့် ဖမ်းဆုပ်လိုက်သည်။
သူ့လက်ထဲရှိ အလင်းလုံးလေးမှာ ပူနွေးသည့်ရောင်ခြည်များ ထုတ်လွှတ်နေသည်။ ထိုအလုံးလေးမှ ထုတ်လွှတ်နေသည့် အလင်းသည် အလွန်တရာ နူးညံ့လှသည်။
"စနစ်လွှဲပြောင်းမှု စတင်..." အင်မော်တယ်ကြီးက ဖြေးညှင်းစွာ ဆိုလိုက်သည်။
ထိုသို့ပြောပြီးသည်နှင့် အဖြူရောင်အလင်းလုံးလေးဆီမှ အလင်းသည် အလွန်တောက်ပလာသည်။
ထိုအချိန်မှာပင် အင်မော်တယ်ကြီးက အန်လင်းအား "ကောင်ကလေး.. မြန်မြန် ကျိန်ဆိုစမ်း.. စစ်နတ်ဘုရားစနစ်ကို လက်ခံပြီးတာနဲ့ မင်းတစ်ဘဝလုံး ဘယ်တော့မှ မစွန့်လွှတ်ပါဘူးလို့.."
ပြီးတော့ ကျိန်ဆိုတာကြီးကလည်း ထိမ်းမြားခြင်း ကျိန်ဆိုမှုနဲ့ ဘာလို့တူနေရတာလား..
အန်လင်းက စဉ်းစားချိန် မရှိတော့တာကြောင့် အလျင်အမြန်ပင် "ကျွန်တော် ကျိန်ဆိုပါသည်.. စစ်နတ်ဘုရားစနစ်ကို လက်ခံပြီးနောက် ကျွန်တော့်တစ်ဘဝလုံး မစွန့်လွှတ်ပါ.."
အန်လင်း၏ ကျိန်ဆိုမှု ပြီးသည့် နောက်တွင် အလုံးလေးက သူ့ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းသို့ ဝင်ရောက်ပြီး ပေါင်းစပ်သွားသည်။
မရှေးမနှောင်းမှာပင် သူစိတ်ထဲတွင် အသံတစ်သံ ထွက်ပေါ်လာသည်။ "လက်ခံသူသည် ထျန်းမင် ခန္ဓာကိုယ်ပိုင်ရှင်ဖြစ်ကြောင်း ထောက်လှမ်းမိပြီး လိုအပ်ချက်များနှင့် ပြည့်စုံပါသည်။ စနစ်၏ ပေါင်းစပ်ခြင်း စတင်ပါပြီ..။"
အန်လင်းက အရမ်းကို စိတ်လှုပ်ရှားနေပြီး ထိုစိတ်လှုပ်ရှားမှုကြောင့် ငိုချင်လာခဲ့သည်။
သူ့အနာဂတ်ကြီးက မှောင်မိုက်နေလိမ့်မည်ဟု အစကထင်နေခဲ့ပြီး ယခုလိုမျိုး ဖြစ်ရပ်မျိုးကို မမျှော်လင့်ခဲ့ပေ။ ယခုအချိန်တွင်တော့ ဤစနစ်နှင့်အတူ ဘဝအသစ်တစ်ခုကို စတင်ဖို့ရန် ပေါင်းစပ်နေပြီပဲ ဖြစ်သည်။
အင်မော်တယ်ကြီးမှာလည်း အရမ်းကို စိတ်လှုပ်ရှားနေပုံ ရသည်။ စိတ်လှုပ်ရှားလွန်းလို့ ငိုတော့မည့်ပုံပင်။
သူက ဒူးထောက်ကာ မျက်ရည်အပြည့်ဖြင့် ကောင်းကင်ကို မော့ကြည့်လိုက်ပြီး မမျှော်လင့်စွာပင် မျက်ရည်များနှင့်အတူ ရယ်မောလိုက်သည်။ "ဘွားဟားဟားဟား.. နောက်ဆုံးတော့ အေပေးက ထွက်သွားပြီ.. ငါ့ဘဝကြီးက လွတ်လပ်ခဲ့ပြီ.."
"အင်မော်တယ်ဖိုးဖိုး.. ဘာမှားလို့လဲ.. အဆင်ပြေရဲ့လား ခင်ဗျား.." ထိုအဖိုးအို၏ ထူးထူးဆန်းဆန်းအပြုအမူကို မြင်ရသဖြင့် အန်လင်း က စိုးရိမ်ပြီး မေးလိုက်သည်။
သူက အရမ်းကို စိတ်လှုပ်ရှားသွားသည့်ကို သတိပြုမိလိုက်သဖြင့် အင်မော်တယ်ကြီးက သူ့ကိုယ်သူ ပြန်ထိန်းလိုက်ပြီး မျက်ရည်များကို သုတ်လိုက်သည်။
"အဆင်ပြေပါတယ်ကွာ.. ငါမလိုချင်တဲ့ အတိတ်က ဖြစ်ရပ်တွေကို ပြန်သတိရမိသွားလို့ပါ.. ကောင်ကလေး.. မင်းက စနစ်ကို လက်ခံလိုက်ပြီဆိုတော့ ပိုပြီးတော့ ကြိုးစားဖို့ လိုလိမ့်မယ်နော်.." အင်မော်တယ်ကြီးက အလေးအနက်ပြောသည်။
"အ..အမ်.... ဟုတ်ကဲ့ပါ.." အန်လင်းက ရိုးသားစွာ ခေါင်းညိတ်လိုက်သည်။
"အဲဒီတော့ မင်းစွမ်းအင်လေ့ကျင့်ဖို့ ကျောင်းတစ်ကျောင်းကျောင်းကို သွားချင်သလား.. မင်းသွားဖို့အတွက် သင့်တော်တဲ့ကျောင်းကို ငါသိထားတယ်.."
စွမ်းအင်ကျင့်ကြံဖို့ ကျောင်းသွားရမယ်..? ဒီလို ကမ်းလှမ်းမှုမျိုးကို သောက်ရူးတွေမှပဲ ငြင်းပယ်မှာပေါ့..
"သွားမယ်.. ကျွန်တော်တကယ် သွားချင်တယ်.." အန်လင်းက တုံ့ဆိုင်းမနေပဲ ပြောသည်။
ထိုသည်ကို ကြားလိုက်ရတော့ အင်မော်တယ်ကြီးက ကျေနပ်စွာ ပြုံးလာပြီး သူ့အင်္ကျီလက်အတွင်းမှ ရွှေစာရွက်ပိုင်းတစ်ခု ထုတ်လိုက်သည်။ အန်လင်းကို ကမ်းပေးရင်း "ဒါက ငါ့ရဲ့ ထောက်ခံစာပဲ.. ဒါနဲ့ဆို မင်းက စုစည်းညီညွတ် ကျင့်ကြံခြင်းကျောင်းတော်မှာ ပညာသင်နိုင်ပြီး အင်မော်တယ်လမ်းစဉ်ကို တရားဝင် ခြေချနိုင်လိမ့်မယ်ကွ.."
အန်လင်းက အံ့အားသင့်သွားသည်။ ထိုအင်မော်တယ်ကြီးသည် သူ့အား ရှည်လျားသည့် ကျင့်ကြံခြင်းလမ်းစဉ်ကို လျှောက်လှမ်းနိုင်ပြီး ထူးချွန်သူ ဖြစ်လာအောင် ကူညီလမ်းခင်းပေးနေခြင်းပေ။
သူက ထောက်ခံစာကို တရိုတသေနှင့် ယူလိုက်ပြီး ကျေးဇူးတင်သည့်အကြည့်နှင့် ကြည့်လိုက်သည်။
"အင်မော်တယ်ဖိုးဖိုးရဲ့ နာမည်ကို ကျွန်တော်က သိလို့ရမလား ခင်ဗျာ..."
"ငါ့နာမည်......... အများကြီး တွေးမနေပါနဲ့ကွာ..." အင်မော်တယ်ကြီးက အန်လင်း၏ခေါင်းကို ညင်သာစွာပုတ်လိုက်ပြီး သူ့မျက်နှာတွင် ကရုဏာသက်သည့် အကြည့်များကိုလည်း မြင်တွေ့ရသည်။
"ကဲ.. ငါသွားရတော့မယ်.. နောက်များမှ တွေ့ကြတာပေါ့ ကောင်ကလေးရေ..."
အင်မော်တယ်ကြီးက လက်ပြနှုတ်ဆက်ပြီးနောက် တိမ်ခိုးများကိုစီးနင်းကာ ပျောက်ကွယ်သွားသည်။
"ဂရုစိုက်ပါ အင်မော်တယ်ကြီး ခင်ဗျာ.." ကောင်းကင်ပေါ်တွင် ပျံသန်းသွားသည့် အင်မော်တယ်ကြီးအားကြည့်ပြီး ကျန်းထျဲက အရိုအသေပြုကာ ပြောလိုက်သည်။
ကောင်းကင်မှနေ ပျံ့နှံ့ရောက်ရှိလာသည့် အင်မော်တယ်ကြီး၏ ရယ်သံမှာ အလွန်တရာကို ကျေနပ်ပျော်ရွှင်နေသည့်ပုံပင်။ ထိုရယ်သံက ဘဝတစ်လျှောက် ထမ်းပိုးထားရသည့် နာကျည်းချက်များအား လွှတ်ချလိုက်နိုင်ရာမှ ထွက်ပေါ်လာခြင်းမျိုးပင်။
ဒီအင်မော်တယ်က ဘာလို့အရမ်းတွေ ပျော်နေရတာတုန်း... သူ့ကြည့်ရတာ ငါ့ထက်တောင် ပိုပျော်နေသေးသလားလို့...
အန်လင်း၏ မျက်နှာတွင် စိတ်ရှုပ်ထွေးမှုများ ပေါ်လာခဲ့ပြီး သူ့ခေါင်းကိုသာ ဆွဲကုတ်လိုက်သည်။
ထိုအချိန်မှာပင် အမျိုးသမီးအသံတစ်ခုက အန်လင်း၏ စိတ်ထဲမှနေ ပေါ်ထွက်လာသည်။ "မင်္ဂလာပါ.."
ထိုအသံကို ကြားလိုက်ရတော့ အန်လင်းက လန့်သွားသည်။ ထိုအမျိုးသမီး၏ အသံမှာ လှပပြီး ညင်သာလွန်းသည်။
ဒါက စနစ်ရဲ့ အသံလား..? အန်လင်းက အံ့ဩပြီး မသေချာပေ။
ထိုအချိန်မှာပင် သူ့စိတ်ထဲ၌ နယ်ပယ်တစ်ခု ပေါ်လာခဲ့သည်။
ထိုနယ်ပယ်သည် မီးခိုးရောင်ဖြစ်ပြီး စာလုံးအချို့သာ ရေးသားထားသည်။ "စစ်နတ်ဘုရားစနစ်သည် ထိုက်ချူ ကုန်းမြေကြီးအတွင်းသို့ ဝင်ရောက်မှသာ စတင်အသက်ဝင်လာမည် ဖြစ်သည်..။"
ထိုက်ချူကုန်းမြေကြီး ဆိုတာက ဘာကြီးလား...?
အန်လင်းက အင်မော်တယ်ကြီး ပေးခဲ့သည့် ထောက်ခံစာကို ပြန်ထုတ်လိုက်ပြီး သူ့လက်ထဲရှိ ရွှေစာရွက်ကို မျှော်လင့်တကြီး ဖြန့်ကြည့်လိုက်သည်။
ထိုရွှေစာရွက်ပေါ်တွင် ခပ်ဖျော့ဖျော့ လက်ဗွေရာတစ်ခုမှ အပ မည်သည်မှ ရှိမနေသည်ကို များမကြာမီပင် သိလိုက်ရသည်။
အန်လင်းက မသေချာမရေရာမှုဖြင့် ထိုစာရွက်ပေါ်ရှိ လက်‌ဗွေရာပေါ်သို့ သူ့လက်ကို တင်လိုက်သည်။
ရုတ်တရက်ဆိုသလိုပင် ရွှေစာရွက်ဆီမှနေ ခမ်းနားတောက်ပသည့် ရွှေရောင်အလင်းများက ဖြာထွက်လာပြီး ကျန်းထျဲအား အံ့ဩချိန်ပင် မပေးကာ ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးကို ဝါးမြိုသွားသည်။
တောက်ပသည့် အလင်းရောင်တစ်ခုက သူ့အမြင်အာရုံထဲသို့ တစ်ဖန်ပြန် ဝင်ရောက်လာသည်ကို အန်လင်းက ခံစားလိုက်ရသည်။
ထို့နောက် သူ့ခန္ဓာကိုယ်မှာ နောက်တစ်ကြိမ်ပြန်လည်ပြီး ကောင်းကင်သို့ မြင့်တက်ပြီးနောက် လွတ်လွတ်ကင်းကင်း ပြန်လည်ပြုတ်ကျနေခြင်းကို သိလိုက်ရပြန်သည်။
နောက်ထပ်တစ်ဖန် အဆောက်အဦပေါ်မှ ပြုတ်ကျသည့် အတွေ့အကြုံကို ရရှိလိုက်ပြန်သည်။ မည်မျှပင် အတွေ့အကြုံရှိနေပါစေ အကြိမ်တိုင်းက အသစ်အသစ်သော ခံစားချက်ကို ဖြစ်ပေါ်စေသဖြင့် အကြိမ်တိုင်း ငိုချင်စိတ်ပေါက်သည် ချည်းသာ။
သူက မြေပြင်ပေါ်သို့ ပြင်းထန်စွာ ပြုတ်ကျပြီး ကံကောင်းထောက်မစွာဖြင့် ရွှေရောင်အလင်းများက လွှမ်းခြုံထားသဖြင့်သာ အသက်ရှင်နေခြင်းပေ။
"ဘယ်လိုမျိုး နေရာရွှေ့ပြောင်းတဲ့ နည်းပညာလဲကွာ.. အရမ်းကို ကြမ်းတမ်းလွန်းတယ်.." ကျန်းထျဲက မြေပြင်ပေါ်တွင် လဲလျောင်းနေရင်း ညည်းညူလိုက်သည်။
သူ့ခေါင်းကို ခက်ခက်ခဲခဲ မော့လိုက်ပြီး သူ့ကိုယ်ဟန်ကို ပြန်လည် စုစည်းလိုက်သည်။
ထို့နောက် သူ့ဘဝတွင် ဘယ်သောအခါတွင်မှ မေ့နိုင်တော့မည် မဟုတ်သည့် အရာကို မြင်တွေ့လိုက်ရသည်။
နဂါးရုပ်ပုံများစွာဖြင့် တန်ဆာဆင်ထားသည့် အဖြူရောင်တိုင်လုံးကြီး နှစ်ခုသည် ကောင်းကင်သို့ မီတာရာပေါင်းများစွာ ထိုးတွက်နေသည်။ ဆန်းကြယ်သည့် ပုံရိပ်များစွာက မည်သည်ကို ထွင်းထုထားမှန်း နားမလည်နိုင်အောင် ရှိနေသည်။
ဝင်ပေါက်နောက်တွင်တော့ ထောင်နှင့်ချီသည့် နန်းတော်များစွာက မျက်စိတဆုံး ရှိနေသည်။
တလက်လက်တောက်ပနေသည့် တိမ်များက နန်းတော်များ ပတ်လည်တွင် လွင့်မျောနေပြီး ကောင်းကင်နှင့် မြေပြင်ကြားတွင် ဝိညာဉ်သားရဲမျိုးစုံက ပျံဝဲလျက်ရှိသည်။ ကောင်းကင်ဘုံသည် ခမ်းနားပြီး ကြီးကျယ်လွန်းလှပေသည်။
အန်လင်းသည် တွေတွေလေး ရပ်နေမိပြီး မျက်နှာတွင်လည်း အံ့ဩခြင်းအပြည့်နှင့်ဖြစ်သည်။
အဲဒီတော့.. ဒီကမ္ဘာကြီးမှာ အင်မော်တယ်လောကဆိုတာ တကယ်ကြီး ရှိတာပေါ့...
ငါကလည်း အင်မော်တယ်လောကကို ရောက်လာနိုင်တယ်ပေါ့.. အန်လင်းက သူ့စိတ်လှုပ်ရှားမှုကို ထိန်းချုပ်လိုက်ပြီး သူ့ကိုယ်သူ တည်ငြိမ်အောင် ပြုလိုက်သည်။
တစ်ခဏကြာတော့ တာအိုဝတ်စုံ ဝတ်ဆင်ထားသည့် မိန်းကလေးတစ်ယောက်က သူ့ဆီသို့ လျှောက်လှမ်းလာသည်ကို မြင်လိုက်ရသည်။ သူ့အခြေအနေကို အတည်ပြုလိုသဖြင့် အလျှင်အမြန်ပြေးသွားပြီး ထိုမိန်းကလေးကို နှုတ်ဆက်လိုက်သည်။
"မင်္ဂလာပါ အင်မော်တယ် ညီမလေး ခင်ဗျာ.." အန်လင်းက မိန်းကလေးကို လက်ပြလိုက်သည်။
အန်လင်း လက်ပြနှုတ်ဆက်သည်ကို မြင်သဖြင့် ထိုမိန်းမလှလေးက သူ့ဆီသို့ လျှောက်လှမ်းလာသည်။
ထိုသည်ကို မြင်တော့ အန်လင်းက စိတ်လှုပ်ရှားစွာဖြင့် "နတ်မိမယ် မိန်းမလှလေး ခင်ဗျာ.. ဒီနေရာက ဘယ်နေရာဆိုတာ သိခွင့်ရမလား ခင်ဗျာ.. ကျွန်တော်က အခုမှရောက်ရှိလာတာ ဖြစ်ပြီး ဒီနေရာနဲ့ အစိမ်းသက်သက် ဖြစ်နေလို့ပါ ခင်ဗျာ.."
အန်လင်း၏ စကားလုံးများကို ကြားရတော့ ထိုမိန်းကလေး၏ အမူအရာမှာ ထူးဆန်းသွားပြီး "ကျိ လိ ကု လု?"
"ဟမ်.. ဘာပြောတာပါလဲ ခင်ဗျာ.." အန်လင်းက အနည်းငယ် ခေါင်းရှုပ်လာသည်။
အန်လင်းကဲ့သို့ပင် ထိုမိန်းကလေးသည်လည်း ခေါင်းရှုပ်သည့် အမူအရာ ဖြစ်လာခဲ့သည်။ "ကျိ လိ ကု လု ဝ လဲ ကျိ လိ?"
အန်လင်းက စိတ်ရှုပ်ထွေးလာသည်။ သူက ဘယ်ကမ္ဘာရဲ့ ဘာသာစကားကို ပြောနေတာတုန်း..။
ကြောက်မက်ဖွယ် အတွေးက သူ့ခေါင်းထဲ ရောက်ရှိလာသည်။
"နတ်သမီးညီမလေး.. မင်း တရုတ်လို ပြောတတ်လား.." အန်လင်း၏ မျက်လုံးများမှာ မျက်ရည်များပင် ဝဲနေသည်။
"ကု လု ကု လု ဝ ကျိ ကျိ ကျိ?" ထိုမိန်းမလှလေးသည် သူမ၏ လက်များကို ခါးတွင်ထောက်လိုက်ပြီး အနည်းငယ် ဒေါသထွက်လာပုံရသည်။
ပြီးသွားပြီ.. ငါတို့မှာ ဘာသာစကားက အတားအဆီး ဖြစ်သွားပြီ..
ဘယ်ကမ္ဘာက စကားတွေကို သူပြောနေတာတုန်း.. ငါတကယ်ကို နားမလည်နိုင်တော့ဘူး..
ထိုအချိန်မှာပင် အန်လင်းက အနည်းငယ် ရူးချင်စိတ်ပင် ပေါက်လာသည်။ သူက ထိုနေရာမှာပင် ရပ်နေပြီး မျက်လုံးများမှာ ကြောင်တောင်တောင် ဖြစ်နေသည်။ သူ့စိတ်ထဲတွင် အတွေးတစ်ခုသာလျှင် ရှိသည်။
ဘာလို့လဲ... ဝတ္ထုတွေထဲကနဲ့ လုံးဝကို မတူတာပဲဟ.. ကမ္ဘာကြီး တစ်ခုလုံးက တရုတ်စကား ပြောကြတာ မဟုတ်ဘူးလားဟင်...
နောက်ဆုံးမှာတော့ အန်လင်းက စတင်ငိုပါတော့သည်။
ငါက စကားကိုတောင် နားမလည်ဘူးဆိုရင် ဘယ်လိုလုပ် ကျင့်ကြံနည်းကို သင်ယူပြီး အင်မော်တယ် ဖြစ်လာမှာတဲ့လဲ.. တခြားသူတွေက သူတို့ရဲ့ ခရီးကြမ်းတွေကို အားနည်းခြင်းကနေ စတင်ကြတယ်.. ငါကျတော့ အစကတည်းက အနှောင့်အယှက်က ငါကိုယ်တိုင် ဖြစ်နေတာပဲ...။